अधिक सटीक हुनको लागी थप आधुनिक समाजले विकास गर्दछ, अत्यावश्यक र विचार-विवेकजनक misogynists जस्तै अधिक अनुपस्थितिहरू देखा पर्छन्।
उनी हरेक ठाउँ र सबै ठाउँमा महिलाहरूको लागि पर्खिरहेका छन्। अधिकतर अवस्थामा, तपाइँ तुरुन्तै बुझ्न सक्नुहुन्न कि तपाई एक भ्रामक हो भने महिलाहरु को बारे मा एक भयानक निर्णय को प्रतिनिधि। नयाँ कामको लागि उपकरण, एक संगीत कार्यक्रममा वा सार्वजनिक यातायातमा, सेवा केन्द्र वा रेस्टुरेन्टमा, उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमहरूको लागि वा रिसोर्टमा। त्यस्ता पुरुषहरू हुन्। र क्षितिजमा यस्तो उपस्थिति एक महिलाको लागि एक वास्तविक एटिएशन हो।
Misogynists कहाँबाट आउँछ?
ओह, तिनीहरूसँग यसका थुप्रै कारणहरू छन् मानवता को कमजोरीमा लागी। र, यो उल्लेखनीय लायक छ, सबै को यति धेरै निर्दोष र अपमानजनक छैन। म यो प्रवृत्तिको उद्घोषणामा भन्न चाहन्छु, महिला र पुरुष दुबै समान समान दोषी छन्। त्यहाँ धेरै मुख्य कारणहरू छन् किनकि एक व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति हो। ती आधारमा, एउटै misogynists धेरै प्रकारमा विभाजित गर्न सकिन्छ।
टाइप गर्नुहोस्: स्मार्ट
महिलाहरूको तिर सबैभन्दा सामान्य मनोवैज्ञानिक "बेवकूफ चिकन" हो। यो गृहिणी बुद्धिमानी मानिन्छ कि उहाँ साँच्चै कुनै पनि महिला भन्दा बढी विकसित गरिएको बुद्धि हो। "तपाईं उनको साथ के लिनुहुन्छ?" त्यो हड्डी हो! "- तिनी भन्छिन्, एक महिला बनाउने बाइबलीय विचारलाई उल्लेख गर्दै।
यी पहिचान सरल छ। तिनीहरू तथ्यको बारेमा धेरै अपमानजनक छन् कि महिलाहरू आफ्नो व्यवसायमा संलग्न छैनन्, जब तिनीहरू राजनीति, व्यापार वा जीवन भन्दा अन्य कुरा पनि व्यस्त छन्। तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि महिलाको ठाउँ भान्सामा छ। यदि तपाईं संदेहमा क्रान्ति छ कि तपाईंको मित्र यस्तो गलत व्यक्ति हो, राम्रो लागी लिनुहोस्। उहाँले निश्चित रूपमा पहिलो चरणहरूमा निर्णयहरू गर्नबाट रोक्न प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ, र त्यसपछि थप र अधिक तपाईंलाई हावी गर्ने कोशिश गर्नेछ, विश्वास छ कि उसले सबै कुरा राम्रो जान्दछ। भविष्यमा, यो काम गर्न निषेध गर्न वा बच्चा र घरमा भन्दा अन्य कुरामा संलग्न हुन सक्छ।
यस मनोवृत्तिको कारण सरल छ। एक व्यक्तिले अवचेतनासाथ डराउन सक्छ कि महिला एकदमै भन्दा राम्रो कुरामा हुनेछ, चालाक, अधिक सफल। गहराईमा, तपाई बुझ्नुहुन्छ, यसको आफ्नै विसंगतिको जटिल छ लुकेको छ।
दुई प्रकार टाइप गर्नुहोस्: त्यागिएको
उहाँको पवित्र दोष भनेको "सबै स्त्रीहरू क्यान्सर हुन्।" "ओह, एक महिला, तपाईंको नाम धोखाधडी छ!" गलत व्यक्तिले तपाईंलाई उद्धृत गर्नेछ, र उसले माथिबाट विजय देख्छ, यसो भन्छ कि उसले तपाईंलाई उजागर गरेको छ, उहाँले जान्दछ कि तपाईले कसरी चलाउनुहुन्छ र तपाईं कसरी असुरक्षित हुनुहुन्छ।
दूर देखि यो राम्रो तरिकाले देखिने देखिन्छ, यो मात्र यो विषयलाई छलफल गर्न धक्का आवश्यक छ। जस्तै, म एक मित्र छ, त्यो यहाँ मान्छे संग धेरै खराब छ - बदल-धोखाधडी-बायाँ-त्याग। अनि त्यसपछि - सुन्नुहोस् र हेर्नुहोस्। उनको लागि यो विषय एक दर्दनाक छ र सम्भवतः उनी आक्रामक नक्कल प्रेमिकाको व्यवहारमा प्रतिक्रिया गर्नेछन्।
तपाईंले अनुमान गर्नुभएको कारणहरूको बारेमा, शायद आफैले। एक पल्ट एक पल्ट, एक महिलाले उसलाई परिवर्तन गरे। उनले विश्वास गरे, र त्यो जस्तै। यो प्रकार कहिलेकाहीं मनमा आउन सक्नेछ किन यो महिलाले गरे। यो मान्छे दुर्व्यवहारकर्ता अज्ञातको लागि लिने छ कि यो महिला प्रकृतिमा निहित छ र तदनुसार तपाईंको व्यवहार गर्नेछ।
तथापि, अधिक विकल्पहरू छन्: एक परिवारले परिवारलाई त्यागेका छन्, स्त्रीको मित्रलाई धोका दिए। आदि कुनै पनि अवस्था "एक औंलाबाट घिमिरे" थियो र अपमानित।
तीन प्रकार टाइप गर्नुहोस्: असफलता
यी शटहरू छन्, त्यसैले बोल्न, सुन्दरता संग चमक गर्दैन। महिला, विफलता, अपरिचित प्रेमको भागमा ध्यान नगर्ने, आफ्नै आफ्नै विफलता र मूर्खताको अवचेतन समझ द्वारा गुणा -एक गलत व्यक्ति तयार छ।
यी सामान्यतया महिलाहरु को खर्च मा गरिन्छ। तिनीहरू पिकअप पाठ्यक्रमहरूमा लगातार अतिथिहरू छन्। त्यहाँ तिनीहरूले उत्तराधिकारीहरूलाई सिक्न र सबै वरपरका महिलाहरूको ढोका ढोकामा तुरुन्तै ओछ्यानमा सुरू गर्न थाले, त्यसपछि "फेंक" प्रक्रियाबाट विशेष आनन्द लिनुहोस्।
कहीं गहराईमा तिनीहरूले बुझ्दछन् कि महिला उनको समस्या र आत्म-संदेहको कारण थियो, र यो, एक प्राकृतिक प्रतिक्रियाको रूपमा, धेरै कारण तिर आक्रामकता बढ्छ।
चार प्रकार टाइप गर्नुहोस्: विचाराधीन
खैर, हरेक स्त्रीले आफ्नो जीवनमा एक पटक भेटेको छ!
उहाँ नजिकको "त्याग" संग छिमेकी हुनुहुन्छ, तर यदि उसले आफ्नो व्यक्तिगत अपराधको लागि महिलालाई घृणा गर्छ, त्यसपछि एभ्भरर - जुन सबै मानिसहरूको लागि पनि भोग्छ। उनको लागि यो सम्मानको कुरा हो। विवादास्पद-एवेंजर विश्वासयोग्य मानिन्छ कि सबै महिलाहरु कुकुर हुन्छन्, र छिट्टै वा पछि उनीहरूले आफ्नो भित्री, घृणित प्रकृति देखाउँछन्।
अक्सर यौन आकर्षक, जो एक महिला, स्काउल र त्यसपछि-बदला-बदला-बदला-बदलाले भ्रामक बनाउन सजिलो बनाउँछ। सिद्धान्तमा, यो एक छद्म-नाइट पूरा गर्न पर्याप्त हुन्छ, त्यसैले यस्तो चालहरूको लागि पतन छैन।
पाँच टाइप गर्नुहोस्: ईर्ष्या
नाम बाट यो स्पष्ट छ कि उनको सोर स्थान कहाँ छ। यो दुर्गमलाई दोहोरो मनपर्छ, उनी भन्छन्, महिलाहरु लाई बाँच्न सजिलो छ, किनकि सबैलाई "सुन्दर आँखाका लागि" दिइन्छ। सबै महिलाहरूले धैर्यता र वेश्यावृत्तिको आरोप लगाए, बिस्तर मार्फत लक्ष्यको उपलब्धिलाई प्रहार गर्छ।
यो कवर, यसैले, यसको आफ्नै विफलता। उनी सोच्छिन् कि महिला एक जटिल रचना हो, तर त्यो बिल्कुल बेकार छ, र उनीहरूले पुरुष पुरुष उपलब्धि र सफलता पाएका छन्। निस्सन्देह, उसले त्यसो गर्न सक्दैन। उहाँ, गरीब, आफैले सबै कुरा गर्नु पर्छ। त्यहाँबाट, ईर्ष्या। र त्यसपछि घृणा।
सामान्यतया, हाम्रो समय मा misogynists विनाशकारी छन्।3अरब पुरुषको ग्रहमा अनुमानहरू अनुसार, हरेक 60 औं एक गलत व्यक्ति हो। यस विचारमा, पुरुषहरूले फुटबलको प्रेममा भन्दा बढी एकताबद्ध छैनन्। प्रायः हरेक शहरमा मग्गिनस्टिसको आफ्नै क्लब र, एक नियमको रूपमा होइन।
अलग-अलग यो कुरा बुझ्न लायक छ कि धेरै महिलाहरु आफैले दोषी छन्। आगो बिना धूम्रपान छैन, तपाईलाई थाहा छ। अधिकतम रूपमा बुद्धिमानी गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र उपभोक्तालाई बेवास्ता गरेर उपचार नगर्न उपभोक्तालाई। र, सम्भवतः, हाम्रा छोरीहरू र ठूला छोरीहरू विश्वव्यापी रूपमा यो विरोधाभासी स्वभाव सामना गर्न सम्भव हुनेछ।
म मेरो बुबाको साथीको साथमा प्रेम गरें - मैले के गर्नु पर्छ?
Mamenkin छोरा - संकेतहरू
महिलाहरु को प्रकार
लसुन स्वस्थ छ?
किन यात्राको सपना?
बिटककोइन के हो - बिटकोन्सको काम बिना मेशिनमा संलग्नहरू
घाँटीमा अनुपवास कसरी व्यवहार गर्ने?
किम कार्दाशियन र केनी वेस्ट एक तेस्रो बच्चा छ
प्रोपोलिस - औषधि गुण र विनाशकारी को टिक्केचर
सिरकासँग पोर्कको स्किर्स
स्वचालित क्रेन Majewski
मोटो रगत - के गर्ने?
कपडाबाट मोडा धुने?
क्रिस्टो डे ला कन्कोर्डिया
तपाईंको आमाको साथ कसरी सम्बन्ध निर्माण गर्ने?
कसलाई छ र तिनीहरूले के खान्छन?
Teriyaki सस मा घर
गर्भाशयको शरीरको एडोडोटेरियोसिस
यूनानीहरूको बीचमा धनको अल्लाह
व्यावसायिक मार्गदर्शन परीक्षण
शनिबारदेखि आइतबार सपनाहरू के हुन्?
पछाडिको मासुको लागि व्यायाम गर्नुहोस्